मन्त्रीको यस्तो घोषणाले वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किनेलाई दियो खुसी ! - ramechhapkhabar.com
मन्त्रीको यस्तो घोषणाले वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किनेलाई दियो खुसी !
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आन्तरिक र बाह्य विमानस्थलमा शटल बस सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको छ । आइतवार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ सभाको ३६ औँ बैठकको समुद्घाटन समारोहमा मन्त्री आलेले आन्तरिक र बाह्य विमानस्थलमा शटल बस सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले यात्रुहरूले विमानको भन्दा धेरै ट्याक्सी भाडा भएको गुनासो गरेपछि अब विमानस्थलमा चार वटा शटल बस निःशुल्क सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री आलेले मजदुरहरूका लागि विमास्थलमा विश्राम घरको निर्माण गर्न निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले भारतीय समकक्षीसँगको भेटमा नेपाललाई भारतलगायत मध्यपूर्व र पश्चिमी देशहरूसँग जोड्ने पश्चिमतर्फको हवाई रुट लिमा–६२६ लाई दुईतर्फी बनाउन पनि आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
पर्यटन मन्त्री आलेले भन्नुभयो, ‘यो मन्त्रालयले विगतमा भन्दा अहिले धेरै तीव्रताका साथ काम गरेका छ, विगतमा हरेक मन्त्री आइसकेपछि बुझ्नलाई धेरै समय लगाउनुहुन्थ्यो, तर म आइसकेपछि तीव्रताका साथमा विगतमा एक सय चार दिनदेखि नेपाल एअरलाइन्सको अफिसमा भएको तालाबन्दी खुलाउने काम गरेँ ।
पर्यटन मन्त्री आलेले भारतीय सिभिल एभिएशन मन्त्री ज्योतिरादित्य एम सिन्धियासँग भारतमा नेपाल एअरलाइन्सको दुई वटा विमान उडान भर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।